दाइजो : मधेसमा ‘क्यास’, पहाडमा ‘उपहार’ | Shirish News
दाइजो : मधेसमा ‘क्यास’, पहाडमा ‘उपहार’
मधेसमा दाइजो प्रथा थियो र छ, त्यो विकृतिको जरोलाई उखेलेर फ्याक्न नयाँ पुस्ता अघि बढेका छन्।
पहाडमा उपहारको नाममा दाइजो लेनदेन हुन्छ, मधेसमा सिधै १० वा १५ लाख नगद मागिन्छ भने पहाडमा उपहार भनेर।
महिला सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाको सिकार भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
काठमाडौं- समाज थरिथरीका हुन्छन्। तर, समाज भने जहाँसुकै हुँदैन। कुनै चोकचौराहामा समाजको वास्तविक मूल्यमान्यता थाहा पाउन सकिँदैन। किनभने, चोकमा समाज हुँदैन। त्यसको लागि त समाजभित्रैको कथावस्तुलाई नियाल्नुपर्छ र बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
केही दिनदेखि म त्यही थरिथरीका समाजबारे सोच्दै आइरहेको थिएँ। शब्द फुर्दैनथे। के लेख्नु, नलेख्नु हुन्थ्यो। केही सोच्थेँ, आफैं बरबराउँथे। ती शब्दहरूलार्ई आकार दिन निकै कठिन हुन्थ्यो। अनि लेख्नै छाडिदिन्थेँ। तर, केही नलेख्नुभन्दा लेख्नु राम्रो नि!
हामी विभिन्न सामाजिक परिवेशबाट आएका छौं। कोही पहाडी समुदायबाट, कोही मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति समुदायबाट। सबै समुदायका मानिसको र त्यो समाजको मूल्यमान्यता फरक हुन्छ नै। त्यसै पनि हाम्रो देश जातीय विविधताको देश हो। तर, आफूलाई ठूला भनाउँदा कथित केही जाति वा समुदायले सोच्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन। समाजशास्त्रको तर्क मान्ने हो भने, समाज परिवर्तनशील हुन्छ भनिन्छ। तर, सोचाइ नबदलेसम्म समाज कहाँ बदलिन्छ र!
म अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। तपाईं हामीले अहिलेसम्म मधेसमा दाइजो प्रथाको विकराल रूपबारे सुन्यौं। “दाइजोकै कारण सासुससुरा मिलेर बुहारीको हत्या” जस्ता शीर्षकमा समाचार पढेर, सुनेर तर्सियौं। मधेसमा त दाइजो नदिँदा बुहारीको ज्यानै लिने रैछन्, बुहारीहरू सुरक्षित छैनन् मधेसमा। त्यसलाई अझै बढाइचढाइ गरेर भन्ने र मधेसको नामैमाथि घृणा गर्ने प्रवृत्ति छ।
यस्तै टिकाटिप्पणी गर्ने त्यही समाजमा म पनि जन्मिएँ, हुर्किएँ। कुरा बुझ्ने भएपछि मैले पनि साथीसंगी र आफन्तकहाँ मधेसी समुदायबारे यस्तै भनेँ। कुरा काट्थेँ।
तर, सुन्नु र भोग्नुमा धेरै अन्तर छ। वास्तविकताको दुनियाँ फरक हुने रहेछ। मधेसमा दाइजो एउटा विकृति हो र छ पनि। त्यसो त विकृति कुन समाजमा छैन? कुन समुदायमा हुँदैन? विकृति कसलाई भन्ने? यो पनि एउटा बहसको विषय बन्न सक्छ। पुराना सामाजिक मूल्यमान्यतालाई अहिले रूढीवाद (विकृति) भनिँदैछ। उदाहरण हेरौं न, पहिले छाउगोठ ठीक थियो, अहिले बेठीक भएर भत्काइँदैछ। १२ वर्षमा बिहे (बालविवाह) गरिदिने हाम्रो समाज यही हो, अहिले बालविवाहलाई विकृतिका रूपमा बुझिन्छ। बालविवाह तराईमधेसमा पनि छ, हिमाल र पहाडमा पनि छ। फेरि दोहोर्‍याउँछु, विकृति सबै समाजमा छ।
एउटा कुनै समाजको विकृतिलाई लिएर त्यो समाज वा समुदायका मानिसहरूलाई होच्याउनु गलत हो। घृणा गर्ने व्यक्ति गलत हो। हो, मधेसमा दाइजो प्रथा थियो र छ, त्यो विकृतिको जरोलाई उखेलेर फ्याँक्न नयाँ पुस्ता अघि बढेका छन्। अभियान चलिरहेकै छ। आगामी दिनहरूमा कम हुँदै जालान्, विश्वास गर्दै जाऔं।
अब केही आफ्नै समाजको कुरा गर्छु। कति मधेसको मात्रै कुरा गर्नु। विस्तारै मधेसमा दाइजो त कम होला रे। तर, पहाडी समाजमा रहेको दाइजो कसरी कम हुन्छ? यो प्रश्नपछि तपाईंको मनमा पहाडमा पनि दाइजो लिने र दिने चलन छ र? भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ होला। तपाईंलाई त दाइजो भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै मधेसको नक्सामात्र दिमागमा आउँछ किनकि हाम्रो दिमागमा त्यही छापिएको छ।
पहाडी समाजमा दाइजो कसरी लिइन्छ र दिइन्छ? सर्वप्रथम त पहाडमा दाइजो होइन, उपहार भन्ने गरिन्छ। यसले सकारात्मक अर्थ र भाव जनाउँछ। दाइजो जसलाई उपहार भनिन्छ, पहाडी समाजमा उपहार माग्ने चलन कस्तो रहेछ त हेरौं। लमी (कारनी) लाई केटा पक्षले भन्छ, “इज्जतका साथ छोरी दिन्छ कि दिँदैन, इज्जतसित छोरी दिँदैन भने बिहे गर्दैनौं।”
इज्जत भनेको के? इज्जत भनेको बेहुला पक्षले लैजाने जन्तीलाई बेहुली पक्षले खुवाउने र दक्षिणा दिएर बिदाइ गर्ने प्रचलन हो। यति त गर्नैपर्ने हुन्छ, नभए इज्जत नै जाने सोच्छन् फेरि। बेहुलालाई सुनको सिक्री र औंठी दिनैपर्‍यो। त्यसपछि बेहुलाको बाबुलाई बेहुली पक्षले सुनको सिक्री र औंठी दिनुपर्ने हुन्छ। बेहुलाको काका (ठूलोबा)लाई औंठी, आमालाई तिलहरी, मामालाई औंठी, दिदीबहिनीलाई तिलहरी, भिनाजु-ज्वाइँलाई औंठी, दाजु-भाइलाई औंठी, एकजोडी कपडा र झोला दिनुपर्ने, फुपू-फुपाजूलाई लुगा दिने गरिन्छ। यति औपचारिकता पूरा गरेपछि “गहु्रँगो” गरी बुहारी ल्याइयो भनिन्छ। सान नै फरक मानिन्छ समाजमा। यतिमात्र कहाँ हो र, फर्निचरका सरसामान दराज, सोफासेट र डाडुपन्यूदेखि वासिङमेसिन, फ्रिजसम्म दिइन्छ।
क-कसलाई सुनको सिक्री र औंठी दिइयो, त्यसको र फर्निचरको सरसामानको हिसाबकिताब निकाल्ने हो भने लाखौं रकम हुन जान्छ। बेहुला पक्षको शाखासन्तानलाई बेहुली पक्षले माथि लेखिएका ती उपहारहरू दिएनन् भने कुरा काट्छन् र भन्छन्, “इज्जतसँग दिएनन्।”
उपहार नदिँदा बुहारीलाई उसको घरपरिवारले जीवनभर नकारात्मक नजरले हेरिरहन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा नभने पनि अप्रत्यक्षमा रूपमा भनिरहन्छ। मानौं, एउटै घरमा दुईजना बुहारी छन्। एउटा बुहारीले धेरै उपहार ल्याए, अर्कोले ल्याएनन् वा दिन सकेनन्। त्यो घरमा बुहारीबीच अन्तर गरिन्छ।
यसरी पहाडी समाजमा उपहारको नाममा दाइजो लेनदेन हुन्छ। पहाड र मधेसको तुलना गर्ने मन छैन। तर, मधेसमा सिधै १० वा १५ लाख नगद मागिन्छ भने पहाडमा उपहार भनेर।
मधेसमा बेहुलाको बाबुलाई सुनको औंठी वा सिक्री दिइँदैन। आमालाई तिलहरी र दाजु-भाइलाई औंठी दिइँदैन। एकजोडी सर्टपाइन्टको कपडा र धोती दिइन्छ। खर्च जोड्ने हो भने बढी त पहाडी समाजमै भएको देखिन्छ। सामान्य बिहे त अपवाद हो। मधेस र पहाड जुनसुकै ठाउँमा सामान्य बिहे हुन्छ। सामान्य बिहेमा तामझाम हुँदैन।
अझै कतिपय महिला हिंसाका घटनाहरू घरभित्रै दबाएर राख्ने गरिन्छ। अर्कोतिर त गाउँ समाजका केही ठूला भनाउँदा मानिसले पञ्चायत बसेर दण्डजरिवाना गरेर मुद्दामामिला फत्ते गरिदिन्छन्। महिला हिंसाका घटना भए प्रहरीकोमा न्याय माग्न जानुभन्दा पहिला नै समाजमै मिलाइन्छ।
रह्यो दाइजो नदिँदा मधेसमा हत्याहिंसाको कुरा। त्यो पनि त मधेसमा मात्र भएको छैन, पहाडमा पनि हिंसा हुन्छ दाइजोको कारण। अर्को कुरा के याद राखौं भने, मधेसमा दाइजो नदिँदा जलाइन्छ, मारिन्छ तर पहाडमा भने जिन्दगीभर पलपल मार्छन्।
हेटौंडामा पैसाको लागि सासु-ससुराले बुहारीको हत्या गरेको (सुस्मिता काण्ड)ले हाम्रो आँखा खोल्छ। यस्ता अन्य थुप्रै घटनाहरू भइरहन्छन्, बस् नजर दौडाउनुपर्छ।
अपराधीको कुनै जाति-समुदाय वा धर्म हुँदैन। त्यसैले दाइजोका कारणले हत्या भन्नेबित्तिकै मधेसतिर औंला ठड्याउनु हुँदैन। आफूतिर पनि हेर्न थाल्नुपर्छ।
अन्त्यमा, गत वर्षको तथ्यांकलाई हेरौं। दाइजोको नाममा होस् वा अन्य केही सवालमा। महिलामाथि सबै ठाउँमा हिंसा भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार देशैभर १४ हजार सात सय ७४ घरेलु हिंसा भएका छन्। दुई हजार दुई सय ३० जना किशोरी तथा महिला बलात्कारको शिकार भएका छन्। दुई सय ५८ जना महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा परेका छन् भने ८६ वटा बालविवाह भएको छ। सात सय ८६ महिला तथा बालिकामाथि बलात्कार प्रयास भएको गत वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ।
अर्को एउटा तथ्यांक हेरौं, गैरसरकारी संस्था ओरेक नेपालको। गत वर्ष ओरेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार साउन २०७५ देखि असार २०७६ सम्मको अवधिमा एक हजार ३१९ वटा हिंसाका घटना भएका छन्। सबैभन्दा बढी हिंसाका घटना प्रदेश नम्बर १ मा भएको छ। प्रदेश १ मा ४९४, प्रदेश २ मा ३९९ वटा, बागमतीमा ७६, गण्डकी प्रदेशमा २, प्रदेश ५ मा २१५, प्रदेश ६ मा ३२ र प्रदेश ७ मा १०१ वटा महिला हिंसा भएको ओरेक नेपालले जारी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तथ्यांकअनुसार महिला सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाको सिकार भएका छन्। महिलाहरूमाथि हुने बढीजसो हिंसा आफ्नै लोग्ने र घरपरिवारका सदस्यबाट हुने गरेका छन्।